Qonda iintlobo zeekhonkco zeCondon to Master Master
Njengomtshintshi emva kwezikhokelo eziza kubangela umenzi wobugebengu, wena, mhlobo wam, kufuneka usebenzise izikhokelo ezifihliweyo kwisicatshulwa sokufunda ukuze ufumane intsingiselo yamagama anzima amagama. Izikhokelo zemixholo zilandelayo: izikhokelo okanye iinkcukacha ezongezelelweyo umbhali unikeza (ngenjongo okanye ayikho) enokukunceda uqonde intsingiselo yegama okanye ibinzana elithile.
Ezi ngongoma zenkcazelo zinokufumaneka kwisigwebo esifanayo nesigama lesizwi, kodwa sinokuvela kwenye indawo kwinqanaba.
Kutheni imixholo yokuCwangcisa ibalulekile
Xa usebenza kwicandelo lokufunda lovavanyo olumiselweyo, uya kufuneka usebenzise ingqiqo enkulu yokufunda ukuze ufikelele. Ukwazi iindidi ezahlukeneyo zeenkcazo zenkcazo kunokukunceda uqonde amagama anzima ngamazwi kumxholo , okufunekayo kwicandelo elide lokufunda. Isicatshulwa siya kuba sinyanisekile ngamazwi ongaziqondi kakuhle. Ngaphandle kwendinyana, unganakho ukucinga ukuba bathetha ntoni, kodwa ngaphakathi kwinqanaba, apho zonke iiflethi zamanzi ezinokuthi zikho, unokulufumana loo mazwi anzima. Izikhombisi zeenkcukacha ziyakunceda xa usebenza ukufumana ingcamango ephambili yesahluko kwaye unzima ukwenza inkcazelo ngenxa yokuba loo mazwi anokunceda ukudibanisa amachaphaza ngendlela ezisebenzisekayo.
Kukho inani leentlobo ezahlukeneyo zeenkcazo zokufunda ukufundela iindinyana kuba ngamnye umbhali ubhala ngendlela eyahlukileyo. Abanye abalobi banikeza inkcazelo encinci kumagama anzima, ukuphonsa isigama esinzima kwiindawo zonke kunye nomxholo omncinci okanye akukho mnye, ngelixa abanye ababhali beqaphela ngokucophelela amavesi abo ukuqinisekisa ukuba umfundi unokuqonda konke azama ukukuchaza.
Yonke into esuka ekubuyiselweni kwegama elichazwe ngokucacileyo igama elisetyenziswayo lingasetyenziswa ekuncediseni ukuqonda.
Umxholo Inkcazo # 1: Inkcazo okanye Ukubuyisela
Incazelo yesigama sigama kwisigwebo ngokwalo, ngokuqhelekileyo silandela igama lesizwi.
Ukuphindaphindwa kukaJack - ukunyaniseka - kwenza ukuba athathe ipensheni yomsebenzi wakhe ngokuxhoma imali yakhe kwi-akhawunti ye-offshore.
Umxholo Clue # 2: IsiNgqamaniso
Isivakalisi sisebenzisa igama elifanayo ukukunceda ukuchaza intsingiselo yesigama lesizwi.
Umqeqeshi webhola we-baseball wagweba ukuphinda kweqela okanye ukukhohlisa emva kokuba avume ukusebenzisa i-steroids ukuphucula imilinganiselo yabo yokubetha.
Umxholo Iqhosha # 3: I-Antonym / Opposite / Contrast
Isivakalisi sisebenzisa igama ngeenkcukacha ezichaziweyo ukunika intsingiselo yesigama lesizwi.
Kwakuyiyona nto eyenza ukuba ndiphule kunye nawe! Ukuba ubuyinyanisekile, andizange ndive ndiyimfuneko.
Ngokungafani nomqeshwa wam wokugqibela owayeneengqibelelo zokusindisa, awunanto ngaphezu kokuphinda kwaye akayi kufumana isincomo esivela kum omnye umsebenzi.
Umxholo Clue # 4: Umzekelo okanye Inkcazo
Olu hlobo lomxholo lusebenzisa imizekelo ukunceda umfundi ukuba anentsingiselo yesigama lesizwi.
Ukuphindaphinda kwakhe kubandakanya ukuhlawula umvuzo womqeshwa wakhe, ukwandisa ukhetho lwazo lwezithuthi, kwaye utyabe imali ayilondolozile ngokwenza njalo.
Ndandixhalabisayo xa wayeba amacici amadayimane, athengisa eBay kwaye waxoxela kum ngexesha lonke.
Abaculi be-10 abaPhambili be-Pop kwi-Terminally Uncool
Ukuqonda amaBharbary Pirates
Ikholeji yeNew Jersey Admissions
Ncoma incwadi enhle kum
Yakha Indlu Yakho - Ngolawulo
Xa i-United Arab Emirates iVed Independence yaseBrithani
Ziqhelise ekuKhankeni iziGulane zeziGaba kunye neziNto
Iintlobo zentambo eDelphi (iDalphi yabaQala)